लोकगायिका सुनितालाई ‘इन्करेजमेन्ट अर्वाड’
काठमाडौँ– लोकगायिका सुनिता गुरुङलाई यसबर्षको तिज म्युजिक अवार्ड–२०७२ अन्तर्गतको ‘इन्करेज्मेन्ट अवार्ड’ प्रदान गरिएको छ ।
तेरियापछि नुवाकोटका निर्मल डिआइडी टप टेनमा
काठमाडौं । चर्चित भारतीय डान्स शो डान्स इन्डिया डान्स (डीआइडी) को उत्कृष्..
नयाँ फिल्मका लागि कैट्रिना जस्तै अनुहारकी केटी खोज्दै सलमान खान
मुम्बाई – सलमान खान अभिनित सुल्तान चलचित्रमा कृति सेनन र परिणीति चोपडमध्ये..
सन्नी लियोनका कारण भारतमा बलात्कार बढेको राखी सावन्तको दाबी
मुम्बाई – भारतीय अभिनेत्री राखी सावन्त सन्नी लियोनको चर्को विरोधीका रुपमा ..
आमिर खान र सलमान खानको फिल्ममा उस्तै कथा ?
आमिर खानको नयाँ चलचित्र दंगल यतिबेला निमार्णाधिन अवस्थामा छ । उनको चलचित्र क्रिस..
यो वर्षको गाईजात्रामा थोरै राजनीतिक व्यङ्ग्य , धेरै सन्देश
काठमाडौँ–नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा जारी ‘तिते जिरे मेरी बास्सै’ गाईजात्रामा दर्शक हास्य व्यङ्ग्यमा रमाइरहेका थिए ।
हाँस्यव्यंग्य क्षेत्रमा जम्दै जीपी जोडी
मोरङ–मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका वडा नं. १ मा बसोबास गर्दै आएका उदीयमान हाँस्यकलाकारका रुपमा अफुलाई अगाडि बढाईरहेको एक जोडिहो जि.पि.जोडी ।
ओडिसाकी अनन्या बनिन् इन्डियन आइडल जुनियर
मुम्बाई – ओडिसाकी अनन्या नन्दा इन्डियन आइडल जुनियरको दोस्रो सीजनको विजेता घोषित् भएकी छिन् । आइतबार सम्पन्न ग्राण्ड फिनालेमा नहिद आफ्रिन र नित्याश्री भेन्काटरामननलाई पछि पार्दै अनन्याले ट्रफीमा कब्जा जमाएकी हुन् । ट्रफीसँगै अनन्याले सोनी टिभीबाट भारु १० लाख बराबरको करार प्राप्त गरेकी छिन् । जीतपछि बोल्दै उनले भनिन्, यो मेर..
लब सबमा त्रिकोणात्मक प्रेम
काठमाडौं – पछिल्लो समयमा फिल्मकर्मीहरुले कलेज उमेरका युवाहरुलाई लक्षित गर्दै प्रेमकथाका फिल्महरु बनाउन थालेका छन् । कलेज उमेरका दर्शकका लागि उनीहरुले फिल्ममा पनि युवा अनुहारलाई नै प्राथमिकता दिन थालेका छन् । फिल्म निर्माताद्वय सुशिल पोखरेल र नरेन्द्र महर्जनले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेको फिल्म ‘लब सब’ पनि युवा दर्शकलाई लक्षित गर्..
चंखे टिमले खोजी गर्यो देश बनाउँने युवा : पश्चिमाञ्चलबाट सात जना छानिए
काठमाडौँ- बिग बजेटको फिल्म चंखे शंखे पंखे यूनिटले देश बनाउँने युवाको खोजी गर्दै पब्लिक स्पिकर नेपालको अडिसन सुरु गरेको छ । यो टिमले पश्चिमाञ्चलका १४ वटा कलेजबाट सात उत्कृष्ट ७ युवा छनौट गर्दै ग्रयाण्ड फाईनलका लागि तयारी सुरु गरेको हो । पहिलो अडिसन पोखरा स्थित स्टेपबाई स्टेप कलेजबाट सुरु गरिएको छ जाहाँ फिल्मका प्रोड्यूसर सन्तोष [..
‘ठमेल डटकम’ : सुबानी मोक्तानको शीर्ष गीत सार्वजनिक (भिडियो हेर्नुहोस्)
काठमाडौँ – चलचित्र हाउस गोपीकृष्णको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र ‘ठमेल डटकम’को शिर्ष गीत सार्वजनिक गरिएको छ । ‘ ठमेल डटकम’बोलको उक्त ओएसटी गीतमा अर्जुन पोखरेलको संगीत, दयाराम पाण्डेयको शब्द र सुवानी मुत्तानको स्वर रहेको छ । यसअघि सार्वजनिक भएको ‘तिमी नभए’ बोलको गीतलाई दर्शकले अत्यधिक मन..
शोभाको प्रस्तुतीमा तीज विशेष कार्यक्रम
काठमाडौं– नेपाली कला संगमले पहिलो तीज बिशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । शनिवार राजधानीको बसुन्धरा स्थित दियालो पार्टी प्यालेशमा आयोजित शुभकामना तथा दर खाने कार्यक्रममा लोक तथा आधुनिक गायक गायिकाको आफ्नो गित तथा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए ।
‘वेलकम ब्याक’ बन्यो वर्षको तेस्रो सफल चलचित्र
मुम्बाई – सैफ अली खान र कटरिना कैफ अभिनित चलचित्र ‘फैन्टम’ असफल भएपछि रिलिज भएको ‘वेलकम ब्याक’ले भने बक्स अफिसमा राम्रो रेस्फोन्स पाएको छ । चलचित्रले रिलिजको पहिलो दिन १४.२५ करोड कमाउँदै पहिलो दिन राम्रो कमाई गर्ने यस वर्षको तेस्रो सफल चलचित्र बनेको छ । जाम्बो स्टारकास्ट रहेको यस चलचित्रमा अनिल कपुर, नाना पाटेकर, परेश […]
मुम्बाई – लामो समयदेखि क्यान्सरसँग लडिरहेका संगीतकार आदेश श्रीवास्तवको शुक्रबार राती निधन भएको छ । ४९ वर्षीय श्रीवास्तवको मुम्बाईस्थित कोकिाबेन अस्पतालमा ४९ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । क्यान्सरका कारण उनी पछिल्लो ४४ दिनदेखि अस्पतालमा भर्ना थिए । उनलाई प्लास्मा सेलको क्यान्सर थियो । उनलाई पहिलो पटक क्यान्सर लागेको सन् २०१० मा पत..
‘अशोक सम्राट’लाई सलमानको बडिबिल्डिङ टिप्स
टिभी सिरियल ‘अशोक’ मा मुख्य भुमिका निभाइरहेका सिदार्थ निगमको बडीलाइ लिएर धेरै चर्चा भइरहेको छ । तर, धेरैलाई थाहा नहोला उनको यो आर्कषक बडी बनाउनमा एक्टर सल्मान खानको अहम भूमिका रहेको छ । अभिनेता अरबाज खानका अनुसार भारतमा जिम कल्चरको सुरुवात सल्मान खानले नै गरेका हुन् । सबैलाइ थाहा भएको कुरा सल्मान खानको जिम प्रति […]
गायिका रेउले भन्छिन्, ‘छाडा गीत ल्याउँदा विकृत बढ्छ’
तीज गीत ‘नाचम् न छमछमी’ मार्फत कस्तो सन्देश दिँन खोज्नुभएको हो ? त्यस्तो सन्देश भन्दा पनि विषेशत रमाइलोका लागी हो । गीतले बोल्न खोजेको भाका ठट्यौउली पारामा केटा÷केटीको बेजोड हानाहान छ । यसलाई तिज गित मात्रै हैन, दोहोरी भन्न पनि रुचाउछु । तपाइको नयाँ गित कस्ता खालका दर्शक स्रोतामा केन्द्रित गर्नु भएको छ ? […]
१० लाख खर्चेर स्लिम भइन् परिनिती चोपडा
(एजेन्सी) पछिल्लो केहि महिनामा परिनिती चोपडाले आफुलाइ निक ट्रान्सफर्म गरेकी छिन् । जसको लागी उनलाइ भारी रकम खर्च गर्न पय्रो । भारतिय संचारमाध्यमका अनुसार पुरै १० लाख खर्चेर बल्लतल्ल चोपडाले १० किलो तौल घटाएकी हुन् । विगत ८ महिनादेखि उनको शरीरमा आएको परिवर्तन उनका फोटोहरुबाट छर्लगैं हुन्छ । अघिल्लो वर्ष उनि मोटी थिइन अब परिनिती [..
बलिवुड चलचित्रको समर्थन गर्दा समस्यामा पाकिस्तानी नायिका
(एजेन्सी) सैफ अलिखान र कटरिना कैफ अभिनित बलिउड फिल्म फैन्टमलाई लिएर अहिले सामाजीक सञ्जालमा चर्को बहस चलेको छ । विशेष गरेर पाकिस्तानमा यस चलचित्र चर्को आलोचना भइरहेको छ । पाकिस्तानलाई आतंकवादसँग जोडिएको भन्दै पाकिस्तानबाट भारतविरोधी सन्देशहरु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भइरहेका छन् । पाकिस्तानकी चर्चित अभिनेत्री मावरा होकेनले ट्वीटरमा..
अमिताभले सेक्स साइट फलो गरेपछि
बलिउड सुपरस्टार अभिताभ बच्चन सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय सेलिब्रिटीमध्येमा गनिन्छन् । फेसबुक र ट्वीटरमा उनलाई फलो गर्ने करोडौं रहेका छन् । सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो फ्यानहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने गरेका छन् । तर, जब उनले ट्वीटरमा एक सेक्स साइट फलो गरेको देखाएपछि केही बेर खैला बैला मच्चियो । आफ्नो नामको एकाउन्टबाट विभिन्न सेक्स साइटहरु फ..
पछिल्लो समय बलिउडमा स्टारहरुले बिहे गर्ने क्रम बढ्दो छ । साहिद कपूरले मिरा राजपुतसँग बिहे गरेको केही समयमै अभिनेत्री आशिनले बिहे गर्दैछिन् । उनी अभिषेक बच्चन र ऋषि कपूर अभिनित नयाँ चलचित्र अल इज वेलमा देखिदैँछिन् । आशिनले माइक्रोम्याक्सका संस्थापकमध्ये एक राहुल शर्मासँग बिहे गर्न लागेकी हुन् । राहुल आशिनभन्दा १० वर्षले जेठा छन् ..
सैफकी छोरी र शाहिदका भाईलाई लञ्च गर्दै करण
निर्देशक डेविड धवनका छोरा वरुण र महेश भट्टकी छोरी आलियाले स्टुडेन्ट अफ द इयरमार्फत बलिउडमा डेब्यु गरेका थिए । यस चलचित्रका निमार्ता थिए, करन जौहार । उनले अब फेरि नयाँ हिरो हिरोइनलाई आफ्नो चलचित्रमा डेब्यु गराउँदैछन् स्रोतका अनुसार उनी अब सैफअलि खानकी छोरी सारा र शाहिद कपूरका भाई ईशान खट्टरलाई चलचित्रमा भित्र्याउँदैछन् । स्रोतका ..
कपिललाई सलमानको झड्का
आगामी हप्ताबाट कलर्स टेलिभिजनमा ‘कमेडी नाइटस् बचाओ’ शुरु हुदैँछ । यस शोलाई कपिल शर्माको कमेडी नाइट्सको विकल्पका रुपमा हेरिएको छ । सलमान खान नै यस शोको सुरुआतमा अतिथि बनेर जाने भएपछि यतिबेला कपिललाई झट्का लागेको छ । भर्खरै मात्र कपिलले अमेरिकामा हुने कन्सर्टका लागि एक हप्ताको छुट्टी लिएका थिए । त्यसैकारण कलर्स च्यानल उनीसँग सन्तु..
गाईजात्रामा देखिए लालबाबु
काठमाडौं, भादै १६ – राजधानीको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा टेलिभिजनका चर्चित हास्य कलाकारहरुको ‘गाईजात्रा महोत्सव’ कायक्रम चलिरहेको छ । कार्यक्रममा मनोज गजुरेलदेखि केदार घिमिरे (माग्ने बुढा), विल्सनविक्रम राई (तक्मे बुढा), शिवहरि पौडेल, किरण केसी, सरिता गुरुङलगायत लगायतलाई हेर्न पाइन्छ । यस पटक सबैभन्दा रुचाइएको प्रस्तुतीमा..
तीजको कोसेली लिएर आइन् अन्जु
काठमाडौं–हिन्दू महिलाहरुको महान चाड हरितालिका तीजको अवसर पारेर गीत संगीतको चहल पहल पनि निकै बढ्ने गर्दछ । यस्तैमा नव प्रवेशी गायिकाहरुले पनि आफ्नो स्वर परिक्षण गर्ने मौका पाउछन् । यही तीजको अवसरमा नव गायिका अन्जु श्रेष्ठले पनि आफ्नो सांगितिक कोसेली लिएर आएकी छिन् । रातो सारी बोलको गीत लिएर श्रोता समक्ष प्रस्तुत भएकी अन्जुले आफ्न..